umshini wekhofi owenza i-lattes iphrinta China Manufacturer
Incazelo:Umshini Wekhofi Owenza I-lattes,Umculi wekhofi womculi,Machine Foam Machine
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > I-Candy Printer > umshini wekhofi owenza i-lattes iphrinta
Umshini wekhofi owenza i-lattes isetshenziselwa ukuphrinta izithombe ekudleni.Izinemibala engu-6 engakwazi ukuphrinta izithombe ezimibalabala nezikhanyayo.Umphumela wokuphrinta ucacile.Umshini ungashintsha umsebenzi wezincwadi.
Umshini wekhofi womculi uhlobo olusha lwephrinta ye-inkjet eqondile yokushicilela okunamandla, isebenza njengeprinta yezinkinobho zendabuko, yenza ukuphrinta ngokunyathelisa ngokuqondile kwe-inkjet, kodwa ngenxa yokuphakamisa kwayo i-flatbed, iyakwazi nokuphrinta cishe kuzo zonke izinhlobo zezinto ngaphandle kwamaphepha , njengamaqebelengwane, izinkuni, izinsimbi, iplastiki, isikhumba, nezinye izingubo, indwangu, njll.
i-cappuccino ikhofi yomenzi we-A3 ifaneleka ngekhekhe, isinkwa, ibhisikidi, ama-macaroni ... izinhlobo zokudla. Ngaphandle kwalokho, futhi kungasebenza ngendwangu, igobolondo lefoni, ikhadi le-PVC, i-DVD, ibhodlela, isikhumba, insimbi, ipeni nokunye. Izindleko ezilahlekile futhi zisebenza kahle.
Imishini yamakhofi e -Semi-Automatic eyenza i-lattes iphrinta
Umshini Wekhofi Owenza I-lattes Umculi wekhofi womculi Machine Foam Machine Umshini Wekhofi Ilogo Umshini wephrinta we-Latte Umshini wekhofi ophethe i-Frother Umshini we-Cafe Latte Umshini we-Caffe Latte